10 Days hambo In eBavaria Germany | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Days hambo In eBavaria Germany
Ukuba nje ndaqalisa ukwenza oluya eBavaria e Germany, ukuba mhlawumbi ndicinga yohambo. Wena ke kusenokwenzeka yaphuphuma kunye inani amazing iindawo ukuze ukuhambela. Plus, ufuna ukwamkeleka kubo bonke a 10 iintsuku yohambo eBavaria.
EBavaria has a lot ukuba anikele, nokuba kungenxa ezithile. Ungatyelela inani elikhulu izixeko ezinhle eBavaria, ezifana eMunich, umzekelo. Unako kwakhona ukuya kwi kakhulu wohlobo indlela utywala ukuba ngaba Connoisseur lwawo.
Siza kukunika hambo eneenkcukacha ye eBavaria, bonke kuya kufuneka ukwenze ukuyilandela uze ube nexesha elihle! ke, makhe sihlolisise.
Loliwe Transport yeyona okusingqongileyo Friendly Way To Travel. Thi sihloko kubhalwe ukuba afunde Train Travel ngu Gcina A Isitimela, Engambi Train Amatikiti Website In The World.
Yintoni Ngaba ekufuneka uyazi phambi kokuba uqalise Nge Yethu 10 Day uhambo In eBavaria?
Ngaphambi kokuba siqale, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uyazi.
EBavaria liphondo elikhulu, kwaye kulula ukuyisebenzisa iiveki kulo. Oku mhlawumbi kuyimfuneko ukuba ufuna ukubona yonke into ngokweenkcukacha enkulu.
kunjalo, ukuba uya kuba 10 uhambo losuku, ke kuya kufuneka ukuba ukusika ezinye izinto ngaphandle. Kuthini okuthe vetshe, bekungayi kuba kuhle ukuya nge train. Ukuba ukwenza ukuba, uya kukwazi ukufumana indawo nganye akukho xesha. Ngaphezu koko, uya kufumana ithuba lokuba babone izimvo kakhulu linikeza eBavaria.
Ngaphezu, ehamba ngololiwe nge eBavaria Kulula kakhulu angabizi. Amatikiti sitshiphu, kwaye kutyelela zonke iimbombo zephondo.
Ekugqibeleni, kufuneka wazi xa kutyelela eBavaria. Amaxesha akho 10 iintsuku hambo eBavaria kufuneka zokugquma naphi na ukususela ngoSeptemba ukuya ku-Oktobha. Uya kukuphepha izihlwele, kwaye uya kufumana ithuba kotyelelo Oktoberfest.
Ke ukuba yonke into ehlanganiswa, makhe sihlolisise uhambo lwakho:
EBavaria day uhambo 1 and 2: eMunich
Xa ukuya eBavaria, kufuneka uqale eMunich. Okokuqala, kube lula ukufikelela, Enoba uphi wena eYurophu. Unga ukuthatha uloliwe phantse kuzo kuphi kufika Munich. okanye, ukuba avela kude kude, wena ndingabhabha. Munich sesona sixeko sikhulu eBavaria, kunye moya zibhabhela ukusuka kwizixeko ezininzi kwihlabathi jikelele. Ukuba ukuba, ungakwazi lula ukufikelela oko zibhabha komnye umzi enkulu kwaye ke ukuya eMunich.
Plus, masingalibali ukuba 10 ngeke ibe ngokupheleleyo ngaphandle eMunich iintsuku yohambo eBavaria. Uya kukufumanisa lo mzi imilingo indawo kotyelelo. Ukusuka mihle clock ende ukuya Englisher Garten, uya kuba ezininzi iindawo kutyelelo.
Ukuba ufuna ukubona kangangoko oku kunokwenzeka, sicebisa ukuba bahlalise kwiziko. Ngalo ndlela, uya kukwazi ukufumana into ngeenyawo.
Ekupheleni kosuku 2, kufuneke u apakishe iibhegi zakho yaye ukuya kwidolophu Berchtesgaden.
3 and 4: Berchtesgaden And The Ijikelezwe National Park
Berchtesgaden ise eMzantsi East yaseBavaria. Kuyinto ephaketheni encinane somhlaba nomda Austria. Uya kufumana amahle kakhulu Ipaki yelizwe e Germany kule ndawo. Plus, nawe uya kufumana ukuchitha ixesha elithile kwidolophu omlingo ka Berchtesgaden.
Ekugqibeleni, kuya kufuneka ukuba batyelele Lake Konigsee kunye iinkozi Nest. Lake Konigsee lelona chibi liphezulu eJamani yaye singqongwe ziintaba ezinhle. Ke ukuba iinkozi Nest, zonke Abathandi imbali uthando luya ukuya kububona, njengoko kwaba isithuba umyalelo we lwamaNazi.
Ukuba ufuna ukuxuba izinto ukuya, kwakhona ukuya Salzburg. Esi sixeko kufutshane nomda kunye Berchtesgaden, kwaye omlingo ngokulinganayo Salzburg!
Unako ke ukugcina obubanjelwe Berchtesgaden imini yakho emangalisayo. Emva kokuchitha ubusuku, uyakwazi ugqithele kwindawo elandelayo ngosuku 5.
Salzburg ku Berchtesgaden
Munich ku Berchtesgaden
Linz ku Berchtesgaden
Innsbruck ku Berchtesgaden
EBavaria hambo Days 5, 6, and 7: Garmisch Partenkirchen, Zugspitze, And Neuschwanstein Castle
Inyathelo elilandelayo kwi yakho 10 iintsuku hambo eBavaria kuquka ezinye kakhulu iindawo amahle e Germany. kanye ngosuku 5 Uyaqala, kufuneke u hop kuloliwe ku Garmisch Partenkirchen.
Nantsi into siyokubona kule ndawo:
Usuku 5: Bahlale kunye tyelela kwindawo engundoqo ye dolophu.
Usuku 6: Yiya omlingo Neuschwanstein Castle. Uyazi ukuba njengomnye zakhe ezinde kakhulu lenkundla ehlabathini. Lo fairytale inqaba authentic kunye nalowo waphefumlela Disney nqaba.
Usuku 7: Ndwendwela uyincopho Zugspitze, ekufuphi ngobulungisa edolophini. Apha uyakwazi ukufumana enye iimbono best of the Alps. Abanye abantu sihamba, kodwa Ndikucebisa ukuba uthathe imoto cable.
Oku kuya kuba yinxalenye elide ngohambo lwakho kwaye kukho enye ebalulekileyo lendlela yokuqalelisa ikhompyutha. ngosuku 8, Unga udlulela Rothenburg.
8: Rothenburg hambo In eBavaria
Usuku 8 ubekelwe bucala ukuze train ende kwaye i idolophu enemibala eRothenburg ob der Tauber. Akuyomfuneko ukuba worry ukuba uhambe inde, uya kuba nexesha kutyelela le dolophu nentle. Mncane kakhulu, kwaye ungabona kwi kwemini enye.
Ekupheleni kosuku, u zidla kwi Schneeballen. Ukuba uyafuna, ungahlala ubusuku, okanye ugqithele kwindawo elandelayo: Nuremberg okanye baseWürzburg.
EBavaria hambo Days 9 and 10: Nuremberg Okanye baseWürzburg
Nuremberg lo mzi yesibini inkulu kwiphondo yaseBavaria. Ikwayindawo ekufuneka uyindwendwele kuwe 10 iintsuku yohambo eBavaria. kunjalo, ukuba uyafuna, ungasoloko ungayicima ku baseWürzburg. Zombini imizi iyelelene omnye komnye kunye Rothenburg, ngoko ke isigaba zehambo ziya kuba lula.
Zombini imizi lwemilingo baza bazaliswa kunye nembali Medieval kunye iinqaba. ke, ngenene oko kuxhomekeke kuwe ukuba isigqibo ezinomdla kakhulu.
Njengoko uya kuba phantse ezimbini seentsuku, ungase ukwazi kutyelela zombini.
ke, kukhona ke. wakho 10 iintsuku yohambo eBavaria, Jemani . Senza isiqiniseko ukuquka yonke indawo ebalulekile kulo mmandla zobungangamela Europe. Siye zibandakanyiwe ukufikelela njani bonke bephela ngololiwe ukuya ngokwenene nayo yonke magic ngayo ukunikela.
Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi yohambo In eBavaria, uzive ukhululekile ukuba contact Gcina A Isitimela.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “A 10 Day uhambo In eBavaria Germany” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fitinerary-bavaria-germany%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
eBavaria europeantravel europetravel eurotrip trainjourney Tranride travelgermany traveltips